Farmaajo "António Guterres Waxaan ilasoo Qaadanay Ammaanka dalka iyo Xoojinta dagaalka lagula jiro Al-shabaab".
Tuesday March 07, 2017 - 17:49:56 in Wararka by
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka Max'med C/llaahi Farmaajo ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyay kulan gaar ah oo uu la qaatay xoghayaha guud ee Ururka Q.Midoobe António Guterres oo socdaal gaaban ku yimid Soomaaliya.
Farmaajo oo looga yeeray garoonka diyaaradaha caalamiga Muqdisho ayaa halkaasi ku qaabilay wafdiga ka socday Q.Midoobe, saraakiil ku sugan xerada Xalane ayaa sheegay in wafdiga UN-ka uu diiday in uu ugudbo Villa Somalia sababa ammaan aawgeed.
Farmaajo oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in António Guterres ay kala hadleen arrimaha abaaraha iyo sidii Q.Midoobe gacan uga gaysan laheyd gargaar lagaarsiiyo dadka tabaalaysan.
Xoghayaha guud ee Q.Midoobe ayaa sheegay in dad ka badan 6 Milyan oo qof Soomaali ah ay la dhibaataysanyihiin abaarta dalka kajirta.
Max’med Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkiisa Jaraa’id ku muujiyay in uu yahay dabadhilif u caysan ajandayaasha dowladda shisheeye isagoo sheegay in ay Q.Midoobe islasoo qaadeen dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero Argagaxisada ee Soomaaliya ka socda.
waxaan kulankeena khaaska ahaa aan diiradda ku saarnay aniga iyo António Guterres, amaanka dalka iyo xoojinta dagaalka lagula jiro Al-shabaab” ayuu yiri Farmaajo.
Shariif Sakiin oo isna magaalada Baydhabo kula kulmay António Guterres ayaa ka codsaday Q.midoobe in ay ka gacansiiso maamulkiisa la dagaalanka Xarakada Al Shabaab.
Hoggaamiyaha cusub ee DF-ka ayaa umuuqda mid qaaday wadadii ay mareen madaxdii isaga ka horraysay oo Afartii sanadood oo ay xilka hayeen waqtigu uga lumay udurbaan tumidda dagaalka caalamiga ah ee Mareykanka iyo xulufadiisa ka wadaan caalamka islaamka waana dagaal aan dhammaad laheyn.
Xeerdheerayaasha ukuurgala arrimaha Soomaaliya ayaa aaminsan in DF-ka iyo maamullada dalka kajira ay ku daba dhegganyihiin gaari ay shukaanta u hayaan dowlado shisheeye waxaana meesha kasii baxaya hankii iyo rajadii ay dadka qaar ka qabeen xukuumadda Farmaajo.